माधव नेपालका १० स्वमार्गीहरू | Nagarik News - Nepal Republic Media
१३ भाद्र २०७८ ८ मिनेट पाठ
ओलीसँग विवाद परिरहेका बेला पनि नेपालले यस्तो सल्लाह दिएका थिए। त्यस्तो नहुँदो हो त अरू नै केही भनेर टार्न सक्थे। नेपालको त्यो सुझाव ओलीले ग्रहण गरे। ओली-नेपाल विवादको उत्कर्षकै बेला रावललाई ओलीले दिएको आश्वासनले उनीसँगको सम्बन्ध मात्र सुध्रिएन, आफूमै समाहित हुने स्थितिमा पु¥याए। ओलीलाई पनि थाहा थियो– किन उनीहरू उनको विरोध गरिरहन्छन् !
अहिले आएर प्रस्ट भएको छ– ओली र स्वमार्गी नेताको उद्देश्य नेपाललाई पार्टीबाट हटाउनु थियो। होइन भने तिनले हिजो दलभित्र उरालेको आवाजको सुनुवाइ कहाँनेर भएको छ ? स्थितिमा कहाँ सुधार आएपछि उनीहरू नेपाललाई छाडेर हिँडे ? ओलीले दुई दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चालेको असंवैधानिक कदम कसरी सच्चियो ? ओलीले कुन कुरामा आत्मालोचना गरेका छन् ? यिनलाई ठूलो घरमा बसिरहँदा प्राप्त हुने सुविधा सबैभन्दा प्यारो भएको हो, सिद्धान्त वा आफूले हिजो व्यक्त गरेका कुरामा होइन।
अहिले आएर प्रस्ट भएको छ– ओली र स्वमार्गी नेताको उद्देश्य नेपाललाई पार्टीबाट हटाउनु थियो। होइन भने तिनले हिजो दलभित्र उरालेको आवाजको सुनुवाइ कहाँनेर भएको छ ? स्थितिमा कहाँ सुधार आएपछि उनीहरू नेपाललाई छाडेर हिँडे ? ओलीले दुई दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चालेको असंवैधानिक कदम कसरी सच्चियो ?
राजनीतिमा यति साह्रो बेइमानी पनि गर्नु हुँदैन, कसैबाट फाइदा लिनसम्म लिएर अप्ठेरो बेला चटक्क छाडेर हिँड्नुजस्तो स्वार्थीपन के हुन्छ र ? यस्तो स्वार्थी समूहलाई लिएर ओली पक्कै पनि अगाडि बढ्दैनन्। उनलाई थाहा छ, अहिले नेपालको पार्टी बन्ने बेलासम्म मात्र तिनको उपयोग हो। खासमा यो समूहले आफ्नो स्वार्थी अनुहार देखाइसकेको छ र यिनीबाट भविष्यसम्म राजनीति चल्दैन। यिनले विश्वास गुमाइसकेका छन्। नेपाललाई पक्कै पनि यतिबेला लाग्दो हो– मैले कस्ता मानिसलाई साथमा लिएर ओलीसँग लड्दै रहेछु !
ओलीलाई तिनले हिजो लगाएका आरोप के मिथ्या थिए ? यस हिसाबमा यिनले आफ्नो राजनीतिक अनुहार गुमाएका छन्। यिनीहरूलाई अविश्वसनीय विदुषकका रूपमा नेपाली राजनीतिले लामो समयसम्म चिनिरहनेछ। वास्तवमा अन्तिम घडीमा नेपाललाई नयाँ दल बनाउन चाहिने आफ्ना केन्द्रीय सदस्य र सांसद जोगाउन समेत हम्मे पर्‍यो। उनका यिनै नेताले तिनलाई तानेर ओलीको पाउमा चढाउन लागेपछि उनीहरू चन्द्रागिरीमा बास बस्न पुगेका थिए।
नेपाल त्यतिबेला केही धर्मराएजस्ता देखिए, जतिबेला उनले सधैँ अगाडि बढाएका ‘दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेता’ पार्टी एकताका नाममा ओलीसँगै उभिएर फोटो खिचाउन पुगे। नेपाललाई छाडेर हिँडेका १० जना हुन्, जसले उनलाई निरन्तर अर्कै दल बनाएर जानुपर्छ भन्ने गर्थे। उनीहरू ओलीविरुद्ध आगो ओकल्थे। आफूलाई नवक्रान्तिको प्रवद्र्धककै रूपमा तिनले आफूलाई उभ्याएका थिए। कठै, नेपालले त्यस्ता मानिसलाई साथ लिएर हिँडेका रहेछन्, जसले अति कठिन घडीमा छाडेर हिँडे। ‘बरु गाँस छाड्नू साथ नछाड्नू’ भन्ने हाम्रो प्रचलित मान्यता बदलिएको छ। अब भन्ने गर्नुपर्छ– ‘गाँस जसरी पनि लिनू साथ भन्ने कुरा फेरिँदै गर्छ।’
प्रकाशित: १३ भाद्र २०७८ ०९:०१ आइतबार